नेपाल–भारत सीमा नाका तीन दिन बन्द हुने – Annapurna Post News
May 9, 2022 May 9, 2022 sujaLeaveaComment on नेपाल–भारत सीमा नाका तीन दिन बन्द हुने
काठमाडौं । वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल–भारत सीमा नाका तीन दिनका लागि बन्द हुने भएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय बैतडीका सूचना अधिकारी खगेन्द्र भारतीका अनुसार भारतसँग सीमा जोडिएको झुलाघाट नाका सोमबारदेखि बन्द हुने भएको हो । निर्वाचन सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै वैशाख २७ गते रात्रि १२ बजेदेखि वैशाख ३० गते रात्रि १२ बजेसम्म सीमा बन्द हुनेभएको हो ।
सो अवधिमा सीमा नाकामा पूर्ण रुपमा आवतजावत बन्द गरिने उहाँले बताउनुभयो । भारतीय अधिकारीहरूसँग समन्वय गरेर नाका बन्द गर्न लागिएको हो । कुनै देशमा चुनाव हुँदा अन्तरराष्ट्रिय नियमअनुसार नै सीमा बन्द गरिन्छ । यसैबीच निर्वाचनलाई नै मध्यनजर गरेर सीमा क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्था कडा गरिएको छ ।
बैतडीका १० स्थानीय तहमा १० पालिका प्रमुख, १० उपप्रमुख, ८४ वडाध्यक्ष, र ३३६ वडा सदस्य गरी कूल ४४० पदका लागि निर्वाचन हुँदैछ ।
निर्वाचनका दिन सबै प्रकारको यातायात बन्द, आन्तरिक उडानबारे बोल्यो सङ्घ-काठमाडौं । वायुसेवा सञ्चालक सङ्घले स्थानीय तह निर्वाचनका दिन सबै प्रकारको यातायात बन्द हुने भएकाले वायुसेवाको नियमित आन्तरिक उडान पनि बन्द हुने जनाएको छ ।
सङ्घका प्रवक्ता योगराज कँडेल शर्माले आइतबार जारी गरेको सूचनामा सवारी आवागमन व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७९ बमोजिम मानवीय उद्धार, सहायता उडान एवं सरकारको निर्देशनमा हुने उडानबाहेक स्थानीय तह निर्वाचनमा आन्तारिक उडान बन्द रहने उल्लेख छ ।
“मिति २०७९ वैशाख ३० गतेका दिन यस सङ्घमा आबद्ध सबै सदस्य वायुसेवाको नियमित आन्तरिक उडान बन्द रहने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ”, सूचना भनिएको छ, “यसबाट यात्रु महानुभावहरूमा पर्न जाने असुविधाप्रति यो सङ्घ क्षमायाचना गर्दछ ।”
सोचेको भन्दा चतुर निस्किए ओली, ओलीले चालेको कदमले राजनीतिमा खैलाबैला !
पाथिभरा माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन, बैशाख २७ गते मंगलबार, तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
यस्तो लेखेकी रहेछन अन्तिम स्टाटस, ड्युटी सकेकी कोपिलाले किन हा निन् आफैँलाई गो ली?
मोटरसाइकलको चक्कामा आफैले लगाएको सल बे’रीदा ल’डेर एक युवतीको मृ
April 20, 2022 April 20, 2022 suja
शिक्षा मन्त्रालयद्धारा हिउँदे, वर्षे र पर्व बिदा कटौती (सूचनासहित)